डियर, एक्स 'घरधनी'
byShyam Rana magar - March 04, 2021
सहरमा मेरो पहिलो डेरा न्युरोडमा थियो । आदर्श समाज पत्रिकाको आडैमा म बस्थें । भर्खर बिहे भएको थियो । बिहे हुनु अघि म दिदीको घरमा बस्थें । डेरा बसाईको अनुभव म सँग थिएन । बिहे पछि दिदीको घरमा म अटाइनँ । छुट्टै बसेरा बनाउनु प¥यो । बनाएँ ।
बिहेपछि श्रीमति माइती गइन् ।
म पोखरामै थिएँ । कता बस्ने ? टुंगो लागि सकेको थिएन ।
अफिस न्युरोडमा थियो । न्युरोड आसपासमै बसे गाडी भाडा जोगिन्छ । गाडी भाडा जोगिएको पैसाले श्रीमतिलाई चट्पटे र पानीपुरि खुवाएर खुसी पार्न पुग्थ्यो । समय पनि जोगिन्थ्यो । अरु पनि धेरै थोक फाइदा हुन्थ्यो ।
मनमनै न्युरोडमै बस्ने योजना बनाएँ । श्रीमति पनि राजी भइन् ।
चिने जानेका सबैलाई न्युराड आसपासमा कोठा खोजि दिन भनें ।
एक महिनापछि कोठा भेटियो । भेटियो भन्दा पनि पाइयो ।
‘आदर्श समाज पत्रिकाको आडैको घरमा कोठा खालि छ । एक पटक हेर्न आउ,’ खाना खादै थिएँ, एकराज दाईले फोन गरे ।
खाना खादै थिएँ । खादाखादैको गाँस छोेडेर कोठा हेर्न जाउ जस्तो भयो ।
कोठा पाइयो ?
श्रीमति ज्यु को प्रश्नको उत्तर दिँदा दिदै थाकि सकेको थिएँ । ‘छिटोछिटो कोठा खोजेर रेडी बनाउन,’ उर्दी आई रहेको थियो ।
जस्तोसुकै भए पनि कोठा मात्रै पाउन पाए बसेरा बसाइ हाल्ने मनस्थितिमा थिएँ ।
कोठा पाइयो ...
चाउथे दिदीको घरबाट बिहानै न्युरोड हानिएँ । एकराज दाई र म कोठा हेर्न गयौं ।
कोठा ठूलै थियो । ट्वाइलेट बाथरुम पनि नजिकै भएको कोठा ठिकै लाग्यो । यत्तिको भएपछि दुई जनाको परिवार अटिन्छ । बाँकी कुरा त तपशिलका हुन् ...
कोठा फाइनल भयो । भोलि नै सामान लिएर आउने कुरा भयो ।
घरधनीले हजार रुपैयाँ पेश्कि दिनुस् भने । मैले दिएँ ।
पानी बत्तिको पैसा आफैले तिर्नुपर्छ । फोहोर गर्न नपाइनेदेखि भित्तामा किला गाड्न नपाइनेसम्मको घरको नियम कानुन रहेछ । ती सबै पालना गर्नुपर्ने सुनाए । कोठा नपाएर हैरान भएको थिएँ । उनले जे जे भन्छन्, सबैमा मञ्जुरनामाको लाहाछाप लगाई रहें । त्यहाँबाट निस्किएँ ।
हामी बस्नुभन्दा पहिले कोही बसेर गई सकेको रहेछ ।
भित्तामा अलिकति धब्बा थियो । खाना पकाउँदा बाँफले धब्बा बसाएको थियो । पत्रिकाले छोपेर खाना पकाउने ग्याँस हामीले पनि त्यही ठाउँमै राख्यौं ।
अफिस नजिकै भएकाले काममा आउजाउ गर्न पनि सजिलो भएको थियो । उनले (श्रीमति)ले पनि मेडिकलमा काम पाई सकेकी थिई । दैनिकी व्यस्ततामै बित्थ्यो । कोठामा बिहान बेलुकी मात्रै हुन्थ्यौं ।
काम सकेर कोठामा फर्किदै थियौं ।
त्यस्तै, १५ दिन जति भएको हुँदो हो डेरा गरि बस्न थालेको । धरधनीले भाई यता आउ त एक छिन भनेर बोलाए । म पनि उनी भएतिरै गएँ । उनले कागजको टुक्रो थमाए ।
कागजमा जोड घटाउको गणित थियो ।
किन दिए ? बुझिनँ ...
'के हो यो ?' सोधें
'कति हो ?'
१५ सय ....
एकै छिन त आत्तिएँ ।
१५ दिनमा पानीको बिल १५ सय !
कहाँ गाउँमा पानीमै खेलेर हुर्केको मान्छे । कहाँको महिनामा पानीको १५ सय बिल । यसरी त एक महिनामा पानीकै बिल तीन हजार तिनुपथ्र्यो । यसअघि डेरा जिन्दगीको अनुभव थिएन । खल्तिमा एक पैसै थिएन । के गर्ने ? कसो गर्ने ? हातखुट्टा गल्यो । भोलि दिउला भनेर निस्किएँ । बिल उनैलाई दिएँ ।
कोठा भाडा ५ हजार । पानीको ३ हजार । बत्तिको समेत जोड्दा १० हजारै भेट्थ्यो । कमाई थियो १५ हजार ।
टाउको दुख्न थाल्यो ।
के गर्ने ? कसो गर्ने ?
भोलिपल्ट १५ सय खोजखाज पारेर तिरे ।
त्यसपछि केही दिन सामान्य बिते । कामैकामले कोठामा बस्ने फुर्सद त थिएन । घरबेटीसँग देखादेख पनि कम हुन्थ्यो ।
कामबाट फर्किदै थिएँ । घरधनी गेटमै रहेछ ।
नागरिकताको फोटोकपि मागे । विश्वास नलागेर मागेको होला भनेर त्यति ठूलो इस्यु बनाउन मन लागेन । मैले पनि दिएँ । बुढी औंलाको छाप पनि लगाउ भन्यो । मैले लगाइ दिएँ ।
कोठा पनि कस्तो भने सिँगो घरै भाडामा लगाइएको थियो । घरधनीको परिवार छुट्टै घरमा बस्थ्यो । हामी बस्ने घरमा डेरा गरि बस्नेहरु मात्रै बस्थे । सुरुमा तीन वटा कोठामा मात्रै मान्छे बस्थ्यो । पछिपछि त तल्लो फ्लोर माथिल्लो तला सबै भरिन थाले । बिहान ५ बजेपछि घरधन्दा सुरु हुने । हल्लाले राम्रोसँग सुत्न पनि नपाइने । ट्वाइलेट जान पनि लाइन बस्नुपर्ने ।
डेरा जिन्दगीको महिना दिन पनि पुगेको थिएन । आजित भई सकेको थिएँ । पैसा मात्रै लिने सुविधा कम । एक दुई जना भए पो हुन्थ्यो । १०, १५ जनाको परिवार एकै ठाउँमा भएपछि फोहोर पनि उत्तिकै हुने नै भयो । यल्ले सफा गरेन । तेल्ले गरेन । झगडै पर्न थाल्यो । स्थिति घर सफा गर्न पनि रुटिन बनाउनुपर्ने भयो । जस्तो कि ः आइतबार हामीले ग¥यौं भने सोमबार अर्कोले ।
पछिपछि त त्यो घरमा पस्नै नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्न थाल्यो ।
बरु, कामै काम मात्र भै दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो । गेटमा नयाँ मान्छे कोही आयो कि भुस तिघ्रे कुकुर भुँकी हाल्ने । न राम्रोसँग पानी आउने । हल्लाखल्ला मात्रै बढी दिमागले काम गर्न छोडी सकेको थियो ।
यो भन्दा बढी यो घरमा बस्यो भने त पागलै भइन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं । बरु, दुई पैसा बढी खर्च होस् । अलि शान्त ठाउँमा बस्ने योजना बनायौं । डेरा जिन्दगीको अलिअलि त अनुभव भै सकेको थियो । हामी आइ सकेपछि पनि दुई जना परिवार त सरेर गई सकेको थियो । कोठा सर्ने योजना बनाएको त्यस्तै १५ दिनजतिमा नयाँ गाउँमा कोठा पनि पाइयो ।
भोलिपल्टै कोठा सर्ने योजना बनाएर बाँकी तिर्नुपर्ने रकम तिरेर कोठा सर्न लागेको जानकारी गराएँ ।
पोकोपुन्तुरो कसेर सकिई सकेको थियो । सामान बोक्न गाडी बोलाई सकेको थिएँ । आउँदै थियो । सामान बाहिर निकालेर कुर्दैै थियौं ।
घर धनीले कोठामा बोलाए । म लुरुलुरु गएँ ।
भएछ के भने भित्तामा लागेको धब्बा लागेछ । नयाँ रंग लगाउन पैसा लाग्ने भो । त्यसको भरपाई कोडा छोडेर निस्किनेले भरपाई गर्नुपर्दो रहेछ ।
मैले दिन्न भने ।
कोठामा बसुञ्जेल भनाभन कहिल्यै भएको थिएन । पैसा तिर्दिन भनेको एक्कासी कड्कियो ।
जे सुकै गर तर पैसा दिन्न भनेर एकै छिन त भनाभनै भयो । अन्तिममा नागरिकताको फोटोकपि र सही छाप पो लिएर आउछ ।
कोठा छोडेर जाने बेलामा कड्कीएको त मैले पहिले नै देखेको थिएँ । तर, कारण के हो थाहा थिएन ।
नदिउ सही छाप छ । दिउ । पहिले नै नियम कानुन सबैतिर मञ्जुरनामा सहित सहि छाप लगाई सकियो ।
मुर्ख सँग दैव डराउछन् भन्छन् । साँच्चिकै हो रैछ । उसलाई पैसा दिएर निस्किएँ ।
नेटको तार झिक्न जानुपर्ने थियो । गएँ ।
यसपटक पनि घरबेटी गेटमै रहेछ । मलाई देख्ने बित्तिकै सुरुमा त लोसे पारामा बसि रहेको मान्छे हावा भरेको ट्युब झैं टाइट भयो ।
आफू फर्केर जानुको कारण खुलाएँ ।
अस्ति तिमी गै हाल्यौं । कोठामा रंग लगाएको अझैं ५ सय रुपैयाँ पुगेन देऊ, अब त यो मान्छेबाट छुटकारा पाए भनेको उल्टै पैसा माग्छ । एकै छिन त अक्क न बक्क ..
६ वर्षे पोखरा बसाईमा ६ चोटी डेरा सरि सकें । अहिले नयाँ घरधनीको माथिल्लो तलामा बस्छु । घरबेटीको परिवार तल्लो तलामा बस्छ ।
न्युरोडबाट पाँच ठाउँमा डेरा सरि सकें । अझैं पनि जब घर सर्नुपर्ने अवस्था आउछ । मेरो भूतपुर्व घरधनी बहुत याद आउछ । बेलाबेला हामी ऊ सँग जोडिएका अनेक किस्सा सम्झिन्छौं । मज्जा लिन्छौं ।
आर्दश समाज आसपासको गल्लिहुँदै जब म हिडी रहेको हुन्छु । एक नजर त्यही घरतिर फ्याक्छु, 'आज कुन चाही डेरावाललाई यसले कानुन सिकाउँदै छ ?'